11 “Lebanọn,+ meghee ụzọ gị, ka ọkụ gbaa osisi sida gị.+
2 Tie mkpu ákwá, gị osisi junipa, n’ihi na osisi sida adawo; n’ihi na e bibiwo osisi ndị dị ukwuu!+ Tienụ mkpu ákwá, unu oké osisi ndị dị na Beshan, n’ihi na a lawo oké ọhịa a na-apụghị ịbanye abanye n’iyi!+
3 “Geenụ ntị! Ndị ọzụzụ atụrụ na-eti mkpu ákwá+ n’ihi na e bibiwo ebube ha.+ Geenụ ntị! Ụmụ ọdụm tojuru etoju na-ebigbọ n’ihi na e bibiwo obere ọhịa tojuru etoju nke dị n’akụkụ Jọdan.+
4 “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke m kwuru, ‘Zụọnụ atụrụ ndị a ga-egbu egbu,+
5 ndị zụtara ha gburu ha,+ ọ bụ ezie na ikpe amaghị ha.+ Ndị na-ere ha ere+ na-asịkwa: “Ka Jehova bụrụ onye a gọziri agọzi. M ga-enweta akụnụba.”+ Ndị na-azụ ha enweghịkwa ọmịiko ọ bụla n’ebe ha nọ.’+
6 “‘N’ihi na m gakwaghị enwe ọmịiko n’ebe ndị bi n’ala a nọ,’+ ka Jehova kwuru. ‘Ya mere, lee, m na-eme ka ụmụ mmadụ chọta onwe ha, onye ọ bụla n’aka mmadụ ibe ya+ nakwa n’aka eze ya;+ ha ga-egwepịakwa ala a, ọ dịghịkwa onye m ga-anapụta n’aka ha.’”+
7 M wee zụọ atụrụ+ ndị a ga-egbu egbu,+ n’ihi unu, unu ndị na-enwe nsogbu n’ime ìgwè atụrụ ahụ.+ M wee chịrị mkpara+ abụọ. Akpọrọ m otu Ịma Mma,+ kpọọ nke ọzọ Njikọ,+ m wee zụọ ìgwè atụrụ ahụ.
8 N’ikpeazụ, m chụpụrụ ndị ọzụzụ atụrụ atọ n’otu ọnwa,+ n’ihi na mkpụrụ obi m edikwaghị ihe ha na-eme,+ mkpụrụ obi ha kpọkwara m asị.
9 M wee sị: “Agaghị m anọgide na-azụ unu dị ka atụrụ.+ Nke na-anwụ anwụ, ya nwụọ. Nke a ga-ekpochapụ ekpochapụ, ka e kpochapụ ya.+ Ndị nke fọrọ afọ, ha rie anụ ibe ha.”+
10 M wee were mkpara m, nke bụ́ Ịma Mma,+ gbujisie,+ iji mebie ọgbụgba ndụ mụ na ndị m.+
11 E wee mebie ya n’ụbọchị ahụ, ndị nke na-enwe nsogbu n’ime ìgwè atụrụ ahụ,+ bụ́ ndị nọ na-ele m,+ wee si otú a mara na ọ bụ ihe Jehova kwuru.
12 M wee sị ha: “Ọ bụrụ na ọ dị unu mma,+ kwụọnụ m ụgwọ ọrụ m; ma ọ bụrụ na ọ dịghị unu mma, unu hapụwa.” Ha wee kwụọ m ụgwọ ọrụ m, mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ.+
13 Jehova wee sị m: “Wụsa ya n’ebe a na-edebe akụ̀,+ ọ bụ ọnụ ahịa dị elu m ruru n’anya ha.”+ M wee chịrị mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ wụsa n’ebe a na-edebe akụ̀ nke dị n’ụlọ Jehova.+
14 M wee gbujisịa mkpara m nke abụọ, bụ́ Njikọ,+ iji mebie mmekọrịta nwanne na nwanne+ nke dị n’etiti Juda na Izrel.+
15 Jehova wee gaa n’ihu ịsị m: “Chịrị ngwá ọrụ nke onye ọzụzụ atụrụ na-abaghị n’ihe.+
16 N’ihi na lee, m na-eme ka e nwee onye ọzụzụ atụrụ n’ala a.+ Ọ gaghị elebara atụrụ ndị a na-egbu egbu anya.+ Ọ gaghị achọ nke dị obere, ọ gaghịkwa agwọ atụrụ ọkpụkpụ gbajiri.+ Ọ gaghịkwa enye nke ọ bụla na-eguzoli ọtọ nri, ndị nke mara abụba, ọ ga-eri anụ ha,+ ọ ga-ekpupụ atụrụ ndị ahụ akpụkpọ ụkwụ ha.+
17 Ahụhụ ga-adịrị onye ọzụzụ atụrụ m, bụ́ onye na-enweghị uru ọ bara,+ onye na-ahapụ ìgwè atụrụ m!+ A ga-egbu ya mma agha n’ogwe aka nakwa n’anya aka nri ya. Ogwe aka ya ga-akpọnwụrịrị,+ anya aka nri ya ga-akpọrịrị.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D38%26Chapter%3D11%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl